သူမပုံကို တက်တူးအကြီးကြီးထိုးပြီး အားပေးခဲ့တဲ့ ပရိသတ်တစ်ယောက်ကြောင့် ပျော်နေတဲ့ ပိုပို – Suehninsi
ကိုယ်ပိုင်အရည်အချင်းအပြည့်နဲ့ ဂီတခရီးလမ်းကို လျှောက်လှမ်းလာခဲ့သူပိုပိုကတော့ အခုဆိုရင် အားပေးသူပရိသတ်အခိုင်အမာနဲ့ ရပ်တည်လာနိုင်ခဲ့သူတစ်ယောက်ပါ။ ပထမဆုံးထွက်ရှိခဲ့တဲ့ “ချစ်ဖူးသမျှ” တေးစီးရီးမှာတင် ပရိသတ်တွေရဲ့ တစ်ခဲနက်ဝန်းရံအားပေးမှုရရှိခဲ့သူဆိုရင်
လည်း မမှားပါဘူး။ တက်သစ်စတွေကို လက်တွဲခေါ်ယူတတ်တဲ့ မွန်မြတ်တဲ့စိတ်ထားလေးကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့အပြင် ပွင့်လင်းရိုးသားတဲ့စကားပြောဟန်တွေကြောင့်လည်း ပရိသတ်တွေကတော့ ပိုပိုကို ပိုလို့အချစ်ပိုနေရတာပါ။ ပိုပိုကတော့ ဒီနေ့မှာ သူ့ရဲ့ပရိသတ်တွေထဲမှ
အရမ်းအားပေးကြမ်းလွန်းတဲ့ပရိသတ်တစ်ယောက်ကို ကျေးဇူးတင်စကားဆိုခဲ့ပါတယ်။ ” ဘယ်လိုပြောရမလဲ? ချစ်သူတွေတောင် ကျမပုံ မထိုးခဲ့ဘူး…. နာမည်လည်း မထိုးကြဘူး… ကျမ Fan က ကျမပုံတူ Tattoo ထိုးတယ်… ပျော်တာပေါ့နော်” ဆိုပြီး အားပေးကြမ်းလွန်းတဲ့
Fan လေးရဲ့ ပုံကို မျှဝေခဲ့ပါတယ်။ ကိုယ်ပိုင်ဆိုင်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့ အရေပြားမှာ ကိုယ်ချစ်ရတဲ့သူတွေကို သေရာပါတက်တူးထိုးပြီး ဖော်ပြကြတာတော့ ဟိုးအရင်ကတည်းက ခေတ်စားခဲ့တဲ့အရာတစ်ခုလို့ ဆိုရမှာပါ။ ပိုပိုကတော့
ထားခဲ့ဖူးတဲ့ချစ်သူတွေတောင် ပုံတူမပြောနဲ့ နာမည်တောင်မထိုးခဲ့ကြပေမယ့် ချစ်ဖို့ကောင်းလွန်းတဲ့ ပရိသတ်တစ်ယောက်ကတော့ သူ့ပုံတူလေး တက်တူးထိုးခဲ့တာမို့ ဝမ်းသာဂုဏ်ယူစွာနဲ့ မျှဝေခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်ကြီးရေ…
ကိုယျပိုငျအရညျအခငျြးအပွညျ့နဲ့ ဂီတခရီးလမျးကို လြှောကျလှမျးလာခဲ့သူပိုပိုကတော့ အခုဆိုရငျ အားပေးသူပရိသတျအခိုငျအမာနဲ့ ရပျတညျလာနိုငျခဲ့သူတဈယောကျပါ။ ပထမဆုံးထှကျရှိခဲ့တဲ့ “ခဈြဖူးသမြှ” တေးစီးရီးမှာတငျ ပရိသတျတှရေဲ့ တဈခဲနကျဝနျးရံအားပေးမှုရရှိခဲ့သူဆိုရငျ
လညျး မမှားပါဘူး။ တကျသဈစတှကေို လကျတှဲချေါယူတတျတဲ့ မှနျမွတျတဲ့စိတျထားလေးကို ပိုငျဆိုငျထားတဲ့အပွငျ ပှငျ့လငျးရိုးသားတဲ့စကားပွောဟနျတှကွေောငျ့လညျး ပရိသတျတှကေတော့ ပိုပိုကို ပိုလို့အခဈြပိုနရေတာပါ။ ပိုပိုကတော့ ဒီနမှေ့ာ သူ့ရဲ့ပရိသတျတှထေဲမှ
အရမျးအားပေးကွမျးလှနျးတဲ့ပရိသတျတဈယောကျကို ကြေးဇူးတငျစကားဆိုခဲ့ပါတယျ။ ” ဘယျလိုပွောရမလဲ? ခဈြသူတှတေောငျ ကမြပုံ မထိုးခဲ့ဘူး…. နာမညျလညျး မထိုးကွဘူး… ကမြ Fan က ကမြပုံတူ Tattoo ထိုးတယျ… ပြျောတာပေါ့နျော” ဆိုပွီး အားပေးကွမျးလှနျးတဲ့
Fan လေးရဲ့ ပုံကို မြှဝခေဲ့ပါတယျ။ ကိုယျပိုငျဆိုငျတဲ့ကိုယျ့ရဲ့ အရပွေားမှာ ကိုယျခဈြရတဲ့သူတှကေို သရောပါတကျတူးထိုးပွီး ဖျောပွကွတာတော့ ဟိုးအရငျကတညျးက ခတျေစားခဲ့တဲ့အရာတဈခုလို့ ဆိုရမှာပါ။ ပိုပိုကတော့
ထားခဲ့ဖူးတဲ့ခဈြသူတှတေောငျ ပုံတူမပွောနဲ့ နာမညျတောငျမထိုးခဲ့ကွပမေယျ့ ခဈြဖို့ကောငျးလှနျးတဲ့ ပရိသတျတဈယောကျကတော့ သူ့ပုံတူလေး တကျတူးထိုးခဲ့တာမို့ ဝမျးသာဂုဏျယူစှာနဲ့ မြှဝခေဲ့တာပဲ ဖွဈပါတယျပရိသတျကွီးရေ…
Source : ဝတ်ရည်မိုး | Reference & Credit : Cele Gabar